Lioka 11: 15-26, - Ny Baiboly
Lioka toko 11, 15-26,
<15fa ny sasany tamin'izay teo nanao hoe: Belzeboba lehiben'ny demony no androahany ny demony; 16ary ny sasany kosa naka fanahy azy ka nangataka famantarana avy an-danitra taminy. 17Fa Jesoa nahalala ny heviny ka nanao taminy hoe: Rava izay fanjakana miady an-trano; mianjera mifanongoa ny trano; 18ka raha miady an-trano àry Satana, ahoana no haharetan'ny fanjakany? satria lazainareo fa Belzeboba no androahako ny demony. 19Ary raha amin'ny herin'i Belzeboba àry no androahako ny demony, amin'ny herin'iza kosa no androahan'ny zanakareo azy? Koa izy ireo ihany no ho mpitsara anareo. 20Fa raha ny rantsan-tànan'Andriamanitra no androahako ny demony, dia efa tonga aminareo tokoa ny fanjakan'Andriamanitra.
21Raha lehilahy matanjaka sy àry fiadiana tsara no miambina ny tranony, dia voaaro ny fananany rehetra; 22fa raha tonga kosa ny mahery noho izy ka mandresy azy, dia sady hahalasa ny fiadiany rehetra izay nitokiany no hizara izay nobaboiny. 23Izay tsy momba ahy, dia manohitra ahy, ary izay tsy miara-mamory amiko, dia manahaka.
24Raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto, dia mandehandeha mitady fialan-tsasatra eny amin'ny tanety maina izy, ka nony tsy mahita dia manao hoe: Hody any an-tranoko izay nivoahako aho. 25Ary nony tonga izy dia mahita azy voadio sy voaravaka, 26ka mandeha maka fanahy fito ratsiratsy kokoa noho izy, dia miditra ireo ka mitoetra eo. Ary ny faran'izany olona izany dia tonga ratsiratsy kokoa noho ny voalohany. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0974 seconds